Ady amin’ny coronavirus : hatsangana ny fitiliana manokana ireo diabetika | NewsMada
Ady amin’ny coronavirus : hatsangana ny fitiliana manokana ireo diabetika
Marefo ary mila fahamailoana tanteraka ireo olona diabetika. Hiso­katra tsy ho ela ny toerana manokana hahafahan’izy ireo manao fitialiana ny tsimokaretina coronavirus.
Nitondra fanazavana, omaly, ny dokotera Ra­harivohitra Henri, tom­pon’andraikitra ao amin’ny sampan-draharaha misahana ny aretina tsy mifindra ao amin’ ny minisiteran’ny Fahasala­mam-bahoaka fa hosokafana tsy ho ela ny toerana mano­kana hahafahan’ireo olona diabetika manao fitiliana ny tsimokaretina coronavirus.
Natao izany mba tsy hifangaroan’izy ireny amin’ireo olona hafa hisorohana ny mety hifindran’ny aretina. Marefo ary mila fikarakarana mano­kana ny olona diabetika raha sanatria ka mararin’ny covi-19. Mitarika any amin’ny “cas grave” mihitsy ny fahavoa­zana, raha ny fanazavan’ny dokotera hatrany ka mila mi­tandrin-tena fatratra izy ireny mba tsy ho voan’ity aretina ity.
Fantatra ihany koa fa hifanindran-dalana amin’ny fiti­liana ny tsimokaretina coronavirus, manomboka izao, ny fitiliana ny diabeta amin’ireo olona tonga manao fizahana. Hahafahana mijery sahady ny toe-tenan’ilay olona izany hanamorana ny fandraisana an-tanana sy ny fitsaboana ary ny karazana fanafody ampiasaina aminy mba hahafahana mitsabo haingana. Hatao ma­hazatra eny amin’ireo toerana fanaovana fitiliana toy ny eny amin’ny Village Voara izany ato ho ato.
Efa eo am-pandaminana ny fitaovana sy ny fotodrafitrasa ary ny olona hiandraikitra izany fitiliana diabeta izany ny tompon’andraikitra, ankehi­triny, raha ny fanazavana ha­trany.
Aparitaka ny toerana fitiliana diabeta, hisy avokoa ny eto Antananarivo Renivohitra ary hiparitaka amin’ny distrika maro izany.
Zava-dehibe ny filaminan’ ny diabeta ho an’ireo olona ma­nana toe-tena diabetika hahafahana manao ny fitsaboana an-tsakany sy an-davany hanavotana ny ainy raha sanatria voan’ny covid-19 izy. Misy fandraisana anjara amin’ny fitiliana ny diabeta eny amin’ ny CSB ary manana ny fitaovana ampiasaina amin’izany izy ireo.